SHELTER | Layma's World
Posted on June 13, 2008 by layma
Filed under: Architecture, Seasonal Post |
« စကားပြောနေသော … Blog ရပ်ဝန်းမှ အလွဲလေးများ ( ၁ ) »
သားကြွက်, on June 14, 2008 at 9:48 am said:
ဗိသုကာ တစ်ယောက်ရဲ့ အမြင်လေး ချပြသွားတယ် ကောင်းတယ်ဗျို့ဒါပေမယ့် ကျနော်ကတော့ ကျောချစရာနေရာတစ်ခုရရင်တော်ပါပြီး တိုက်ဆောက်ဖို့ဘီလပ်မြေ တို့ထုံးတို့မ၀ယ်နိုင်လို့😛
mtj, on June 14, 2008 at 12:22 pm said:
shelter ဆိုတာ ဘာလဲ တော့မသိဘူး။ ထီပေါက်လို့ အိမ်ဆောက်ရင် ပုံအလကားဆွဲပေး 🙂
ညိမ်းညို, on June 14, 2008 at 2:53 pm said:
ဆောက်ပေးသွားမှာပေါ့ 😀 ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ပါစေခင်ဗျာ 🙂
အမကြီး security code ကို၃ ၄ ခါပြန်ရိုက်နေရတယ်ဗျို့ ကာလာဘလိုင်းဖြစ်နေပီလားမသိ ကောင်းကောင်းမမြင်ရတော့ဘူး 🙂
chaos, on June 14, 2008 at 4:51 pm said:
MhawSayar, on June 15, 2008 at 3:07 am said:
Shelter အကြောင်း လာဖတ်တယ် အစ်မရေ.. Shelter ဆိုမှ အဲဒါနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ စကားပုံလေးတွေ သွားသတိရမိသဗျ…
“သစ်တစ်ပင်ကောင်း၊ ငှက်တစ်သောင်းနား” တို့၊ နောက် “အရိပ်နေနေ၊ အခက်ချိုးချိုး” တို့.. “အရိပ်ပြ၊ အကောင်မြင်” တို့…
ဆက်လက်အားပေးလျက် ရှိပါကြောင်း. 🙂
THS, on June 15, 2008 at 5:33 am said:
soemoe, on June 15, 2008 at 11:29 am said:
မမရေ..ဘာရေးရေးစာဖတ်သူ စိတ်ဝင်စားအောင်ရေးနိုင်တယ်…အသင့်တင့်စိတ်ချရတဲ့ ..shelter..လေးတစ်ခုလောက်လက်ဆောင်ပေးပါလား…. 😛 😛
nu-san, on June 16, 2008 at 9:33 pm said:
( အိမ်ဆောက်ချင်တယ်ဆိုရင် လေးမဆီ ဆက်သွယ်မယ်နော်… အလကားဆွဲပေးမယ် မဟုတ်လား.. :D)
ဒီက အိမ်တွေကတော့ နေရာကျဉ်းတော့ မရ ရအောင် ဒီဇိုင်းဆွဲပြီး အခန်းကို ပြင်ဆင်ထားတတ်ကြတယ်။ တော်တယ်လို့ပဲ ချီးကျူးရမလား အသက်ရှုကျပ်တယ်လို့ပဲ ဝေဖန်ရမလား မပြောတတ်တော့ဘူး လေးမရေ.. ဒါပေမယ့် အိမ်လေးတွေ၊ တိုက်ခန်းမှာ အခန်းဖွဲ့စည်းထားတာတွေက ချစ်ဖို့ကောင်းတာ အမှန်ပဲ။ ကိုယ်တိုင်ကတော့ အင်ဂျင်နီယာ ပညာ၊ ဗိသုကာ ပညာဆိုလို့ ဘာမှ မသိ.. 😛
Htoo Tay Zar, on June 17, 2008 at 9:46 pm said:
ShwunMi_ရွှန်းမီ, on June 18, 2008 at 11:57 am said: